Vaovao - Tsenan'ny firavaka diamondra, fifaninanana eo amin'ny teknolojia sy ny tantaram-pitiavana
Diamond Jewelry Market, fifaninanana eo amin'ny teknolojia sy ny tantaram-pitiavana
Ny diamondra novokarina dia niseho tany am-piandohan'ny taona 1950. Na izany aza, vao tsy ela akory izay, ny vidin'ny famokarana diamondra dia nanomboka ambany be kokoa noho ny vidin'ny diamondra fitrandrahana.
Ny fandrosoana farany ara-tsiansa sy ara-teknolojia farany dia nampihena be ny vidin'ny famokarana diamondra vokarin'ny laboratoara. Amin'ny ankapobeny, ny vidin'ny fambolena diamondra dia 30% ka hatramin'ny 40% ambany noho ny vidin'ny diamondra fitrandrahana. Ity fifaninanana ity, iza no ho mpandresy farany? Ilay diamondra mpitrandraka ve izay voaforona voajanahary ambanin'ny tany, sa ny fambolena diamondra noforonin'ny teknolojia?
Ny laboratoara fikolokoloana diamondra sy diamondra momba ny harena ankibon'ny tany dia mitovy amin'ny singa ara-batana sy simika ary opika ary mitovy tanteraka amin'ny diamondra fitrandrahana. Ao amin'ny mari-pana avo lenta sy tontolo iainana avo lenta, ny laboratoara dia mamorona diamondra hanahaka ny dian'ny diamondra fitrandrahana, maniry avy amin'ny masomboly diamondra kely ho lasa diamondra lehibe kokoa. Herinandro vitsivitsy monja dia mila mamorona diamondra ao amin'ny laboratoara. Na dia efa nitovy aza ny fotoana nananganana diamondra, dia an-jatony tapitrisa taona ny fotoana nananganana diamondra ambanin'ny tany.
Ny fambolena diamondra dia mbola vao manomboka amin'ny tsenan'ny varotra vatosoa.
Araka ny tatitra nataon'ny orinasa Morgan Stanley Investment Company, ny varotra mavesatra amin'ny diamondra novolavolain'ny laboratoara dia 75 tapitrisa ka hatramin'ny 220 tapitrisa dolara amerikana, izay 1% monja amin'ny varotra diamondra manerantany. Na izany aza, amin'ny taona 2020, nanantena i Morgan Stanley fa ny varotra diamondra vokarin'ny laboratoara dia hahatratra 15% amin'ny tsena ho an'ny diamondra kely (0,18 na latsaka) ary 7,5% ho an'ny diamondra lehibe (karatra 0,18 sy ambony).
Ny famokarana diamondra ambolena dia kely ihany koa ankehitriny. Araka ny angon-drakitra avy amin'ny Frost & Sullivan Consulting, ny famokarana diamondra tamin'ny 2014 dia carat 360,000 fotsiny, raha karatra 126 tapitrisa kosa ny vokatry ny diamondra nitrandrahana. Manantena ny orinasa mpanadihady fa ny fangatahan'ny mpanjifa vatosoa lafo vidy kokoa dia hampiroborobo ny famokarana diamondra tafakatra 20 tapitrisa tamin'ny taona 2018, ary amin'ny 2026 dia hitombo 20 karat izany.
CARAXY Diamond Technology no mpisava lalana eo amin'ny tsena anatiny amin'ny fambolena diamondra ary izy koa no mpikambana voalohany ao amin'ny IGDA (International Association for the Cultivation of Diamonds) nitazona orinasa tany Shina. Andriamatoa Guo Sheng, tale jeneralin'ny orinasa, dia manantena ny amin'ny fampandrosoana ny tsena amin'ny fambolena diamondra.
Hatramin'ny nanombohan'ny asa tamin'ny 2015, ny varotra diamondra novokarin'i CARAXY dia nitombo avo telo heny amin'ny varotra isan-taona.
CARAXY dia afaka mamboly diamondra fotsy, diamondra mavo, diamondra manga ary diamondra mavokely. Amin'izao fotoana izao dia manandrana mamboly ny diamondra maitso sy volomparasy i CARAXY. Ny ankamaroan'ny diamondra nambaran'ny laboratoara ao amin'ny tsena sinoa dia latsaky ny 0,1 karat, fa ny CARAXY kosa dia mivarotra diamondra izay mety hahatratra 5 karaty diamondra fotsy, mavo, manga ary 2 karat.
Mino i Guo Sheng fa ny fandrosoana amin'ny teknolojia dia afaka manapaka ny fetran'ny haben'ny diamondra sy ny lokony, ary mampihena ny vidin'ny fanapahana diamondra, mba hahafahan'ny mpanjifa maro kokoa mahatsapa ny firavaka diamondra.
Nanjary nihanahery vaika ny fifaninanana teo amin'ny tantaram-pitiavana sy ny teknolojia. Ireo mpivarotra vatosoa vita amin'ny solony dia mitaraina hatrany amin'ny mpanjifa fa ny fanararaotana diamondra dia niteraka fahasimbana lehibe teo amin'ny tontolo iainana, ary koa ireo olana ara-etika tafiditra amin'ny “diamondra ra”.
Diamond Foundry, orinasa diamondra fanombohana any Etazonia, dia nilaza fa “azo itokisana tahaka ny soatoavinao” ny vokatra. Leonardo DiCaprio (Little Plum), izay nilalao tamin'ny sarimihetsika Blood Diamonds tamin'ny 2006, dia iray amin'ireo mpampiasa vola tao amin'ilay orinasa.
Tamin'ny 2015, nanangana orinasa DPA (Fikambanan'ny mpanamboatra diamondra) ny orinasa mpitrandraka diamondra fito lehibe indrindra eto an-tany. Tamin'ny taona 2016, nanangana fanentanana antsoina hoe “Mahalana izy ireo. Rare dia diamondra. ”
Ny goavana indrindra amin'ny harena ankibon'ny tany De Beers dia mitanisa ny ampahatelon'ny varotra manerantany, ary ny goavam-be dia pessimistic momba ny diamondra sentetika. Jonathan Kendall, filohan'ny De Beers International Diamond Grading and Research Institute, dia nilaza hoe: "Nanao fikarohana be dia be erak'izao tontolo izao izahay ary tsy hitanay fa nitaky diamondra sentetika ny mpanjifa. Diamondra voajanahary no tadiavin'izy ireo. . "
”Raha manome diamondra sentetika anao aho ary miteny aminao hoe 'tiako ianao' dia tsy ho voakitika ianao. Ny diamondra sentetika dia mora vidy, manelingelina, tsy afaka mampita fihetseham-po, ary tsy afaka maneho tsotra izao hoe tiako ianao. ” Kendall nanampy Road.
Nicolas Bos, filoha sady CEO an'ny firavaka frantsay Van Cleef & Arpels, dia nilaza fa ny famokarana Van Cleef & Arpels dia tsy hampiasa diamondra sentetika mihitsy. Nilaza i Nicolas Bos fa ny fomban-drazana an'i Van Cleef & Arpels dia tsy tokony hampiasa afa-tsy vatosoa fitrandrahana voajanahary, ary ny soatoavina "sarobidy" atolotry ny vondrona mpanjifa dia tsy ny laboratoara no mamboly diamondra.
Banky tsy mitonona anarana amin'ny banky fampiasam-bola any ivelany miandraikitra ny fanakambanana orinasa sy ny fividianana orinasa dia nilaza tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i China Daily fa miaraka amin'ny fiovana tsy miova amin'ny foto-kevitra momba ny fanjifan'ny olona sy ny fahaverezan'ny hatsaran'ny "diamondra maharitra", diamondra nambolena tamin'ny fomba artifisialy. mitohy miakatra. Satria ny diamondra voavolavola artifisialy sy ny diamondra voajanahary voajanahary dia mitovy tanteraka amin'ny bika aman'endrika, dia manintona ny mpanjifa ny vidiny mora kokoa amin'ny diamondra ambolena.
Na izany aza, mino ilay banky fa ny fanararaotana diamondra dia mety mifanaraka amin'ny fampiasam-bola kokoa, satria ny fihenan'ny diamondra mitrandraka dia hampiakatra hatrany ny vidin'izy ireo. Ny diamondra karatà lehibe sy ny diamondra tsy dia avo lenta dia lasa fon'ny olona manankarena ary manana sandam-bola lehibe. Mino izy fa ny fambolena laboratoara ny diamondra dia manampy bebe kokoa amin'ny tsenan'ny mpanjifa marobe.
Tombanan'ny fikarohana fa ny famoahana ireo diamondra voahangy dia hitsangana amin'ny taona 2018 na 2019, ary avy eo hihena tsikelikely ny famokarana.
Nilaza i Kendall fa ny vatsy diamondra nataon'i De Beers dia afaka manohana “am-polony taona vitsivitsy” ihany koa, ary sarotra be ny mahita toeram-pitrandrahana diamondra lehibe vaovao.
Mino i Guo Sheng fa noho ny fanentanam-po ataon'ny mpanjifa, ny tsenan'ny peratra mariazy dia fanamby ho an'ny laboratoara hamboly diamondra, fa satria ny firavaka isan'andro amin'ny firavaka sy ny firavaka dia nitombo haingana ny varotra diamondra vokarin'ny laboratoara.
Raha amidy singa voajanahary amin'ny vatosoa voajanahary ny vatosoa vita amin'ny solon-tsolika, dia mety hampidi-doza ny mpanjifa koa ny fiakaran'ny hafanan'ny vatosoa artifisialy.
De Beers dia nanambola vola be tamin'ny haitao fanaraha-maso diamondra. Ny fitaovana fanaraha-maso diamondra kely farany teo, AMS2, dia ho hita amin'ity volana Jona ity. Ny teo alohan'i AMS2 dia tsy nahamarika diamondra latsaky ny 0,01 karat, ary ny AMS2 no nahafahana namantatra ny diamondra na dia 0,003 karat aza.
Mba hiavaka amin'ny diamondra amin'ny fitrandrahana, ny vokatra avy amin'i CARAXY dia antsoina hoe laboratoara avokoa. Samy mino i Kendall sy i Guo Sheng fa zava-dehibe ny fiarovana sy fanatsarana ny fahatokisan'ny mpanjifa ny tsena mba hahafantaran'ireo mpividy firavaka karazana diamondra novidiny lafo.
Fotoana fandefasana: Jul-02-2018